शिलान्यास गर्दैमा सडक बन्ने भए किन १६५ मात्रै, एक लाख सडक शिलान्यस गर न - हाम्रो देश
शिलान्यास गर्दैमा सडक बन्ने भए किन १६५ मात्रै, एक लाख सडक शिलान्यस गर न
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले शिलान्यास गर्दैमा सडक बन्ने भए १६५ मात्रै नभएर एक लाख सडक एकै पटक शिलान्यास गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलाीलाई चुनौति दिएका छन् ।
ओलीले शनिबार एकै पटक १६५ वटा सडकको शिलान्यस गरेपछि दाहालले यस्तो चुनौति दिएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, शिलान्यास नै गरेर निर्माण हुने भए,किन १६५ मात्रै रु १ लाख नै सडक शिलान्यास गरे भैहाल्छ नि, एकै पटक सबै घरमा पक्की सडक दिए त ओली महान भैहाल्थे । कतिपय वर्षौं अगाडि सुरु भै अरबौं खर्च भैसकेका सडकलाई नयॅा नाम दिएर शिलान्यास गरिएको रहेछ १ यस्तो प्रोपोगण्डा त हिटलरले पनि सक्दैनथ्यो होला ११
शिलान्यास नै गरेर निर्माण हुने भए,किन१६५ मात्रै? १लाख नै सडक शिलान्यास गरे भैहाल्छ नि,एकै पटक सबै घरमा पक्की सडक
दिए त ओली महान भैहाल्थे।
कतिपय वर्षौ अगाडि सुरु भै अरबौ खर्च भैसकेका सडकलाई नयॅा नाम दिएर शिलान्यास गरिएको रहेछ!
यस्तो प्रोपोगण्डा त हिटलरले पनि सक्दैनथ्यो होला !